Firaisankinan�ny Sendika (SSM) Namaly bontana ny mpisolovava
Nampiaka-peo ny avy amin�ny Firaisankinan�ny Sendika eto Madagasikara (SSM) omaly manoloana ny fanehoan-kevitry ny Holafitry ny mpisolovava,
tamin’ny alalan’ny maître Hubert Raharison fa raharahan’olon-tokana, dia ny raharaha Claudine Razaimamonjy ihany no sahanin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM). Tsy miombon-kevitra eo anatrehan’ny fanambaran’ny holafitry ny mpisolovava izahay, hoy i Dr Raymond Rakotonihasy sekretera jeneralin’ny SSM. Nambarany fa efa be dia be ny fandraisan’andraikitra nataon’ny SMM, indrindra ny fijoroana tamin’ireny fanaterana ny mpiasan’ny Air Madagascar izay voaroaka tamin’ny tsy ara-dalàna ireny. Aoka izay ny fanaovana mizana tsindrian’ila fa ny olom-pirenena dia mitovy eo anatrehan’ny lalàna sy ny lalàmpanorenana manoloana ny tsy fampiharana didim-pitsarana, izay fandikan-dalàna. Manoloana ny raharaha Claudine Razaimamonjy tamin’ny filazana fa zavatra efa nisy hatry ny ela ny resaka fandefasana hotsaboina any ivelany (EVASAN), dia tena gaga izahay satria vao mainka aza izany manamafy sy mampitombina ny fandraisan’andraikitry SSM, hoy i Dr Raymond Rakotonihasy. Nametra-panontaniana izy fa raha ny hevitry ny mpisolovava izany dia tokony hitohy foana ny hoe efa nahazatra sy niainana teto fa rehefa misy olona ambony sy manam-bola ary akaiky ny mpitondra mandika lalàna dia avelao handeha fa aza misy mandray andraikitra ? Ny fampidirana ny resa-politika, dia nilaza izy ireo fa ny fiarovana ny zon’ny mpiasa sy ny fanaovana ny tany tan-dalàna dia resaka politika mihitsy, ka aoka tsy hanaiky holemen-tsaina, hoy i Dr Raymond Rakotonihasy.